Football Khabar » डि मारियाको २ गोलमा पिएसजीको जित, गोलकिपरलाई रातो कार्ड !
डि मारियाको २ गोलमा पिएसजीको जित, गोलकिपरलाई रातो कार्ड !
फ्रेन्च लिग वान फुटबलमा लिड लिडर पिएसजीले अर्को जित हात पारेको छ । गत राति भएको खेलमा पिएसजीले १० खेलाडीमा सीमित मार्सेइलीलाई ३–१ ले निराश बनायो ।
आफ्नो घरमा पिएसजीका लागि पहिलो गोल हाफको अन्तिम समयमा केलियन एमबाप्पेले गरेका थिए । उनले इन्जुरी समयमा गोल गरेर घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । यससँगै उनले लिगमा २६ गोल गरेका छन् ।
त्यसपछि खेलको दोस्रो हाफको सुरुमै पाहुना टोली खेलमा फर्कियो । उसका लागि भालेर जर्मनले गोल गर्दै खेल बराबरी बनाए ।
त्यसपछि खेलको खेलको ५५औं मिनेटमा डि मारियाले बक्स भित्रबाट सट लिँदै गोल गरे । र, टिमलाई २–१ को अग्रता दिलाए ।
त्यसपछि पाहुना टोलीलाई झट्का लाग्यो । ६२औं मिनेटमा मार्सेइलीका गोलरक्षक स्टिभ मान्डान्डाले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिर हातले बल समाएपछि उनी सोझै रातो कार्ड खाँदै बाहिरिए । त्यसमा पाएको फ्रि किकमा डि मारियाले नै गोल गर्दै पिएसजीलाई ३–१ को अग्रता दिलाए ।
त्यसपछि खेलको अन्तिम समयमा पिएसजीले पेनाल्टी पाएको थियो । एमबाप्पेलाई बक्समा लडाएपछि पाएको पेनाल्टीमा एमबाप्पेले नै पेनाल्टी हाने । तर, उनी त्यसमा चुके । उनको प्रहार वैकल्पिक गोलकपिर योहान पेलेले बचाएर थप गोल खानबाट बचाए ।
अब यो जितसँगै पिएसजीले २८ खेलबाट ७७ अंक जोडेको छ । ऊभन्दा पछि पछि २९ खेलबाट ५७ अंक जोडेको लिले दोस्रो स्थानमा रहेको छ । लिलेभन्दा पिएसजीले एक कम खेलेको छ ।
प्रकाशित मिति ४ चैत्र २०७५, सोमबार ०२:३९